युट्युबमा भिडियो हेरेर दाजु र बहिनीले जे सिके, थाहा पाउँने जो कोही हैरान ! – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /Intresting/युट्युबमा भिडियो हेरेर दाजु र बहिनीले जे सिके, थाहा पाउँने जो कोही हैरान !
काठमाडौं । एक अनौठो प्रकरणमा संलग्न दाजु–बहिनी पक्राउ परेका छन् । भारत, महाराष्ट्रको पिपरीमा प्रहरीले दाजु र बहिनीलाई नक्कली नोट छाप्ने प्रकरणमा संलग्न भएको बताउँदै नियन्त्रणमा लिएको हो । उनीहरुको साथबाट ५०, १००, २००, ५००, र २,००० का नक्कली मुद्रा बरामद गरिएको हो ।
पिंपरी प्रहरीबाट प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपीको पहिचान सुनिता राई र प्रदीप राईको रूपमा गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार ती दुबैले एक वा दुईवटा नक्कली नोटहरू सक्कली नोटसँग मिसाएर बजारमा पठाउने गरेका थिए । तिनीहरूको लक्ष्य प्रायः बुढापाका र गाउँका बासिन्दालाई ठग्नु थियो ।
यस समूहमा थप व्यक्तिहरू पनि मिलेको हुन सक्ने बताउँदै प्रहरीले गम्भीर ढंगले अनुसन्धान थालेको छ । मंगलबार, संगीता भोसरी तरकारी बजारमा तरकारी किन्न आइन् । त्यसपछि उनले केहि नक्कली नोटहरू सहित विक्रेतालाई नक्कली नोट पनि दिइन् । नोटको गुणस्तर देखेर विक्रेतालाई शंका लाग्यो । यसको जाँच गरेपछि उनले थाहा पाए कि यो नक्कली नोट हो ।
जानकारी अनुसार संगीता र उनको भाइले युट्यूबमा भिडियो हेरेर नक्कली नोट बनाउन सिकेका थिए । संगीताको विवाह केही वर्ष अघि भएको थियो र उनका दुई बच्चा पनि छन् ।
उनका पतिले प्रहरीलाई एउटा बयान दिएकी छन् कि उनी छुट्टै कोठामा बस्छिन् र उनी भित्र के गरिरहेकी थिईन कसैलाई थाहा थिएन् । यद्यपि प्रहरीले पतिको बयान सत्यदेखि टाढा रहेको शंका गरेको छ । त्यसकारण उनलाई हिरासतमा लिदै सोधपुछ भइरहेको छ ।
यी घरेलु उपायले छातिलाई चाहेजति पुष्ट बनाउनुहोस
तपाईँको अनुहारभन्दा हात कालो छ ? यसरी गोरो बनाउनुहोस्